आउने कोही छ माइका लाल ? « Etajakhabar
जानुका धमला – पछिल्लो साता झण्डै १५ वर्षपछि साथीहरु हालखबर सोध्न आए । भाइसाथीले के गर्ने भनेर सोधे, अग्रजले के गर्छौ नानी भने ।
मसला पिस्ने हातले बारुद पिस्नुपर्छ भनेर प्रशिक्षित गर्ने तत्कालीन कमाण्डर अर्जुनलाल श्रेष्ठ अहिले पनि बे’पत्ताको सूचीमा छन् । अर्जुनलालसँगै म जीवनमा पहिलोपटक कम्मरमा बाँधेको टि’एनटी ग्रि’नेड सम्झन्छु, देब्रे काँध हुँदै दाहिने कम्मरमुनि झु’ण्ड्या’ए’को भ’रुवा ब’न्दुक सम्झन्छु । पहिलोपटक प’ड्कि’एको ब’न्दु’क र त्यसबाट निस्किएको बा’रुदको मीठो ग’न्ध सम्झन्छु । प्रमाणित छा’पामा’र भएपछि औ’षधिको झोला, बन्दुक, कलम र क्यामेरा बोकेर यु’द्धमोर्चामा निस्किएको कुराले अहिले पनि काउकुती लगाउँछ ।
शान्तिसम्झौतापछि ल’ड्दा’ल’ड्दैका सिपाही हामीलाई ७ मुख्य र २८ सहायक शिविरमा थन्क्याइयो । त्यसपछि शुरु भयो वर्ग परिवर्तन र उत्थानको अभ्यास । त्यसपछि शुरु भयो सर्वहाराबाट बुर्जुवाकरण । शान्ति र क्रान्तिका नाममा धोकाका श्रृंखला । परिवर्तनका नाममा सिपाही र जनतामाथि वि’श्वासघा’त । हाम्रा भावना र विचारमाथि अ’त्याचा’र । समग्रमा हामी बाटो गुमाएका बटुवा भयौं र अहिलेसम्म त्यही रूपमा छौं ।
यो महिना नेपालमा राजनीतिक जात्रा शुरु भयो । नामबाट बदनाम भएका हाम्रा कमाण्डर कालीबहादुर खाम लुसुक्क बालुवाटार छिरे र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मुख्य चारवटा माग राखेर पूर्वलडाकुलाई ओली क्याम्पतिर छि’राउने अभियान थाले । यो अभियानका अर्का अभियन्ता थिए रामबहादुर थापा बादल, जसलाई हिजो माओवादीका पूर्वलडा’कुभन्दा छोराका लागि दीप बस्न्यातका पुत्रहरू साथी बनाउन प्रिय हुन्थे । तिनीहरू हठात् बौरिएर जमानाका माओवादी ल’डाकु खोज्न निस्किएका हुन् ।
हिसाब गर्दै ल्याउँछु, जसले सहादत प्राप्त गरे तिनका परिवार बिलखबन्द छन् । जो घाइते र अं’ग’भं’ग भए तिनी पनि जी’वनमर’णको दोसाँधमा छन् । जो बे’प’त्ता भए तिनको कुनै खबर छैन । जो अयोग्य करार गरिए तिनलाई पनि कुनै सहानुभूति र सहयोग मिलेन । र, १५ वर्षपछि निर्जीव रूखमा पालुवा किन पलायो ? निर्जर बालुवामा सिँचाई कसरी भयो ?
अचम्म लाग्छ, सत्तामा र सत्तावरिपरि हुँदा ऊ जमानाको जनमुक्ति सेनाको डेपुटी कमाण्डर भएको ब्याज खाइरहेकाहरूलाई अनायास कसरी स्मृति पलायो ? परम्परागत राज्यसत्ताबाट छाती, तौल, उचाइ नापेर बनेको तलबी सेना थिएन त्यो, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित राता सिपाही थिए तिनीहरू । जसै तिनमाथि सं’कट म’डारि’यो अनि थाले जनमुक्ति सेना खोज्न । पश्चिम पुगेर जनार्दन शर्माले म’च्चाएको को’कोहो’लो यही होइन ?
निःसन्देह अहिले पनि जनमुक्ति सेना नेतृत्वविहीन छन् । न तिनको कुनै संगठन छ न भए पनि कुनै प्रभावकारिता । प्रचण्ड, बैद्य, बाबुराम, बादल, किराँती, बिष्ट, आहुती सबका आफ्नै मण्डली मात्र छन् । त्यस्ता मण्डली जो समग्रमा होइन अंशमा मात्र जनमुक्ति सेनाको आदर्श बोक्छन् । र, तिनलाई अहिले जनयु’द्ध दिवशमा अनुपस्थित हुने नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले साखुल्ले प’ल्टेर तान्न खोज्दैछन् । अहिले बजारमा उनीहरूको लिलामी शुरु भएको छ । बोलकबोल लागेको छ । यसमा पनि दुईथरी डम्फु’ बज्न थालेको छ । एउटा पूर्वजनमुक्ति सेनालाई अनेक प्रलोभन देखाएर अलगथलग गर्न चाहन्छ । त्यसैले घाइते, अपांगको निःशुल्क उपचार र प्रमाणपत्र, थप एक दुई लाखको हड्डी फालिएको छ । अर्को पुरानो बिरासतको व्यापार गर्न चाहन्छ । केरुङबाट ल्याएर धुन्चे, त्रिशूली, ककनी हुँदै बालाजुमा मैजारो गरिएका च्यांग्रासरह खरिद, बेचबिखन गरिएका ल’डा’कुलाई भावनात्मक सौदाबाजी गर्न उद्यत छ ।
श्रोत – जना आस्था बाट